Tag Archive for "आकाशे पुल" - काठमाडाैँमा तत्काल दुई स्थानमा मात्रै आकाशे पुल !
काठमाडाैँमा तत्काल दुई स्थानमा मात्रै आकाशे पुल !
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा चालु आर्थिक वर्षमानै दुई आकाशे पुल निर्माणको तयारी शुरु गरिने भएको छ । महानगरले यसै आर्थिक वर्ष केही समय अघिनै पुल निर्माणको काम शुरु गर्ने भने पनि विभिन्न आन्तरिक व्यवस्थापनको काम गर्न नसक्दा काम हुन सकेको थिएन । विभिन्न आठ स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सकिने पुल निर्माण काम थाल्ने बताइए पनि तत्काल भने दुई स्थानमा निर्माण गर्न लागिएको प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले बता... थप पढ्नुहोस्
मुम्बईमा आकाशे पुल भत्किँदा ६ जनाको मृत्यु, ३० भन्दा बढी घाइते
भारत । भारतको मुम्बईमा पुल भत्किँदा ६ जनाको मृत्यु भएको छ । शुक्रबार साँझ मुम्बईस्थित छत्रपति शिवाजी रेल स्टेशन नजिकै पैदलयात्रीका लागि बनाइएको पुल अकस्मात भत्किँदा ६ जनाको मृत्यु भएको हो भने ३३ जना घाइते भएका छन् । घाइतेहरुको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । दुर्घटनामा घाइते हुनेको अबस्था गम्भिर रहेकाले मृत्यु हुनेको संख्या बढन सक्ने बताइएको छ । मानिसहरुको आवतजावत बढि भएको समयमा सो दुर्घटना भ... थप पढ्नुहोस्
कोटेश्वर–कलङ्की चक्रपथ विस्तार कार्य सम्पन्न ! ‘हाती छि¥यो, पुच्छर अड्कियो’
जोखिम मोलेर बाटो काट्नुपर्ने बाध्यता काठमाडौं । ‘हाती छि¥यो, पुच्छर अड्कियो’ भने झै कोटेश्वर–कलङ्की चक्रपथ विस्तार कार्य सम्पन्न भए पनि त्यसको ‘सर्भिस ट्रयाक’ को निर्माण कार्य भने अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । ‘सर्भिस ट्रयाक’ निर्माण हुन नसक्दा सवारी साधन र पैदल यात्रुहरुलाई द्रुतगतिमा सवारी साधन गुड्ने विस्तारित चक्रपथ भएर नै जोखिम मोलेर बाटो काट्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । नेपाल र चीनबीच भएको सम... थप पढ्नुहोस्